Level အဆင့်ဆင့် English Quiz (3) - အမေး ၊ အဖြေ နဲ့ ရှင်းလင်းချက် - Learn English Actively and Effectively in Yangon !!! 09 4311 5202 ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / Beginner to Elementary Level / Elementary to Pre-intermediate Level / Intermediate Level သင်ခန်းစာများ / Level အဆင့်ဆင့် English Quiz / Level အဆင့်ဆင့် English Quiz (3) - အမေး ၊ အဖြေ နဲ့ ရှင်းလင်းချက်
Level အဆင့်ဆင့် English Quiz (3) - အမေး ၊ အဖြေ နဲ့ ရှင်းလင်းချက်
Zin Zae 6:41 PM Beginner to Elementary Level , Elementary to Pre-intermediate Level , Intermediate Level သင်ခန်းစာများ , Level အဆင့်ဆင့် English Quiz Edit
Level အဆင့်ဆင့် English Quiz (3)
အမေး ၊ အဖြေ နဲ့ ရှင်းလင်းချက်
ဟို တစ်နေ့က တင်ပေးလိုက်တဲ့ Quiz အတွက်
အမေး ၊ အဖြေ နဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေကို တွဲပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဝင်ရောက် ဖြေဆို လေ့ကျင့်သွားသူတွေ အတွက် အကျိုး တစ်ခုခု ရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
< အမေး >
ဘတ်စ် ကားပေါ်ကို တက်တာ < ကို ဘယ်လို ပြောရမလဲ ?
1. Climb the bus
2. Go up the bus
3. Get up the bus
E. (ABCD)တစ်ခုမှ မမှန်
အကျီင်္ ဝတ်လိုက်တယ် < ဆိုတာကို ဘယ်လို ပြောရမလဲ ?
A. wear my shirt.
B. wear on my shirt.
C. put my shirt.
D. put on my shirt.
အကျီင်္ ချွတ်လိုက်တယ် < ဆိုတာကို ဘယ်လို ပြောရမလဲ ?
A. put of my shirt.
B. put off my shirt.
C. take/took of my shirt.
D. take/took off my shirt.
ငါ သူ့ကို / သူ့ လုပ်ရပ်တွေကို သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး ဆိုတာကို
" Put " ကို သုံးပြီး ပြောပါ ။
" Put" ကို Phrasal verb အနေနဲ့ သုံးရမှာပါ ။
< အဖြေ နဲ့ ရှင်းလင်းချက် >
D. Get on the bus
D. take off my shirt.
Put on က အကျီင်္ ဝတ်တာ ကို သုံးလို့ရပေမယ့်
ချွတ်တာကိုတော့ Put off မသုံးဘဲ ပဲ Take off သုံးတာ ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ် ။
Put off ဆိုတာက အဝတ်အစား တစ်မျိုးမျိုးကို ချွတ်လိုက်ပြီး လုံးဝ ပြန်မဝတ်တော့တာမျိုးကို အသုံးများပါတယ် ။
Put off ရဲ့ အခြား အသုံးတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ် ။
- ပွဲ တစ်ခုခုကို ရွှေ့ဆိုင်းတာ
- လူ တစ်ယောက် ကို စိတ်ပြောင်းစေတာ
- တစ်ခုခုကို အာရုံစိတ်နေချိန်မှာ အနှောက်အယှက် ပေးလိုက်တာ
- လူ တစ်ယောက်ကို မနှစ်သက်စေတော့တာ
စတဲ့ အခြား အသုံးတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ် ။
သာမန် နေ့စဉ်ပြောနေတဲ့ အကျီင်္ ချွတ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ put off မသုံးဘဲ
take off သာ သုံးလိုက်ပါ ။
- I can't put up with him.
( him နေရာမှာ အခြား သင့်တော်ရာကို အစားထိုး သုံးနိုင်ပါတယ် )
Page ကို Like လုပ်ပြီး
- Follow > See first လုပ်ထားရင်
- ဒါမှမဟုတ် Desktop နဲ့ သုံးလို့Get notification လုပ်ထားရင်
Post တွေ မလွတ်တမ်း ဖတ်နိုင်မှာပါ ။
Level အဆငျ့ဆငျ့ English Quiz (3)
အမေး ၊ အဖွေ နဲ့ ရှငျးလငျးခကျြ
ဟို တဈနကေ့ တငျပေးလိုကျတဲ့ Quiz အတှကျ
အမေး ၊ အဖွေ နဲ့ ရှငျးလငျးခကျြတှကေို တှဲပွီး တငျပေးလိုကျပါတယျ ။
ဝငျရောကျ ဖွဆေို လကေ့ငျြ့သှားသူတှေ အတှကျ အကြိုး တဈခုခု ရှိလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ ။
< အမေး >
ဘတျဈ ကားပျေါကို တကျတာ < ကို ဘယျလို ပွောရမလဲ ?
E. (ABCD)တဈခုမှ မမှနျ
အကြီင်ျ ဝတျလိုကျတယျ < ဆိုတာကို ဘယျလို ပွောရမလဲ ?
အကြီင်ျ ခြှတျလိုကျတယျ < ဆိုတာကို ဘယျလို ပွောရမလဲ ?
ငါ သူ့ကို / သူ့ လုပျရပျတှကေို သညျးမခံနိုငျတော့ဘူး ဆိုတာကို
" Put " ကို သုံးပွီး ပွောပါ ။
" Put" ကို Phrasal verb အနနေဲ့ သုံးရမှာပါ ။
< အဖွေ နဲ့ ရှငျးလငျးခကျြ >
Put on က အကြီင်ျ ဝတျတာ ကို သုံးလို့ရပမေယျ့
ခြှတျတာကိုတော့ Put off မသုံးဘဲ ပဲ Take off သုံးတာ ပိုပွီးသငျ့တျောပါတယျ ။
Put off ဆိုတာက အဝတျအစား တဈမြိုးမြိုးကို ခြှတျလိုကျပွီး လုံးဝ ပွနျမဝတျတော့တာမြိုးကို အသုံးမြားပါတယျ ။
Put off ရဲ့ အခွား အသုံးတှလေညျး အမြားကွီး ရှိပါတယျ ။
- ပှဲ တဈခုခုကို ရှဆေို့ငျးတာ
- လူ တဈယောကျ ကို စိတျပွောငျးစတော
- တဈခုခုကို အာရုံစိတျနခြေိနျမှာ အနှောကျအယှကျ ပေးလိုကျတာ
- လူ တဈယောကျကို မနှဈသကျစတေော့တာ
စတဲ့ အခွား အသုံးတှလေညျး အမြားကွီး ရှိပါတယျ ။
သာမနျ နစေ့ဉျပွောနတေဲ့ အကြီင်ျ ခြှတျတယျ ဆိုတာကိုတော့ put off မသုံးဘဲ
take off သာ သုံးလိုကျပါ ။
( him နရောမှာ အခွား သငျ့တျောရာကို အစားထိုး သုံးနိုငျပါတယျ )
Page ကို Like လုပျပွီး
- Follow > See first လုပျထားရငျ
- ဒါမှမဟုတျ Desktop နဲ့ သုံးလို့Get notification လုပျထားရငျ
Post တှေ မလှတျတမျး ဖတျနိုငျမှာပါ ။